Nguwuphi umahluko phakathi kwezincedisi zomoya ezihamba neselfowuni? | Lianchuang
Ukupholisa umoya / isifudumezi
Umoya opholileyo woShishino-lweNkanyamba
Mini epholileyo-inyosi yomoya opholileyo
Ingcali yoMoya oyiNinzi 4 ku-1
Ingcali yoMoya oyiNinzi 5 ngo-1
I-Multi Tower Air Expert 4 kwi-1
Indawo epholileyo yomoya
Inqaba yomoya opholileyo
Indawo epholileyo yoMntu oMncinci
ITower Ultra Thin Heater
Inqaba ene-Eco Heater
Igumbi lokufudumeza elipheleleyo
Isikhuphi msi ofumisayo
Umoya wokucoca umoya
Nguwuphi umahluko phakathi kwezincedisi zomoya ezihamba neselfowuni?
Izinto zokupholisa umoya zezona zixhobo zisetyenziselwa ukupholisa ehlotyeni. Zihlala zilungisiwe. Ukulungiselela lula, kukho ii-air conditioner ezihamba-hambayo kunye nezincedisi-ntengiso kwimarike, kwaye akukho kuzo zilungisiweyo. Ke yintoni umahluko phakathi kwee-air conditioner ezihamba nomoya kunye nezomoya?
1. Yintoni isixhobo esihambisa umoya esihambayo?
Isixhobo somoya esihambisayo sisixhobo somoya esingahambisa ngokuthanda. Kukho ii-compressors, iifeni zokukhupha umbane, izifudumezi zombane, i-evaporator, i-air-cooled fin condensers kunye nezinye izixhobo emzimbeni. Umzimba ufakelwe iplagi yamandla kunye ne-chassis base inee-casters. iselfowuni. Inkangeleko inemfashini, ilula kwaye iyaxekeka.
2. Yintoni umoya opholileyo?
Ukupholisa umoya luhlobo lwesixhobo sendlu kunye nefeni kunye nemowudi yomoya. Inemisebenzi emininzi enjengonikezelo lomoya, ifriji kunye nokufuma. Usebenzisa amanzi njengesixhobo esiphakathi, unokuthumela umoya obandayo ongaphantsi kwamaqondo obushushu egumbi okanye umoya oshushu. Uninzi lokupholisa umoya lunecebo lokucoca uthuli lokucoca umoya. Ukuba kukho umaleko we-photocatalyst kwisihluzi sothuli, inokuba nesiphumo senzalo.
Okwesithathu, umahluko phakathi kwee-air conditioner kunye neicooler air
1. Isixhobo somoya esihambisayo sinemodeli encinci kunye nevolumu, kwaye isitayile kwaye iyaphatheka. Isixhobo somoya esihamba neselfowuni luhlobo lwesixhobo sokupholisa umoya esihamba sigqobhoza umgaqo woyilo wendabuko, sincinci, sinamandla aphezulu okusebenza kwamandla, ingxolo ephantsi, akufuneki ukuba ifakwe, kwaye sinokubekwa ezindlwini ezahlukeneyo ngokuthanda.
2. Isipholisi somoya sisebenzisa amanzi njengesixhobo esiphakathi kwaye singahambisa umoya obandayo ongaphantsi kwegumbi lobushushu okanye umoya oshushu nofumileyo. Xa kuthelekiswa neefeni zombane, izinto ezipholileyo zomoya zinemisebenzi yomoya omtsha nokususa ivumba. Iicooler zomoya zinokuthintela kuphela imitha yombane ekukhubekeni, kodwa zikwanemvakalelo epholileyo kunye nehlaziyayo.
Okwesine, yeyiphi engcono, isixhobo somoya esihambisayo okanye umoya opholileyo
1. Izinto ezipholileyo zomoya zingalithoba iqondo lobushushu malunga ne-5-6 degrees kunabalandeli abaqhelekileyo, babe namandla asezantsi okusetyenziswa kwamandla, abanamsebenzi wokukhupha isidima, kwaye bandise ukufuma komoya xa kusetyenziswa, okulunge ngakumbi kwiindawo ezinemozulu eyomileyo. Isiphumo sokuhlengahlengisa ubushushu siphantse silingane naleyo yeemeko zemeko yendalo. Ngokucacileyo inokulungelelanisa iqondo lobushushu lomoya ongaphakathi, kwaye inokulungiswa kumaqondo obushushu ahlukeneyo njengoko kufuneka. Nangona kunjalo, emva kokusetyenziswa, iqondo lobushushu langaphakathi alilingani, ekulula ukubangela ukuphazamiseka kunye nezifo zokupholisa umoya. Kwangelo xesha, amandla makhulu kwaye ukusetyenziswa kwamandla kukhulu.
2. Isixhobo somoya esihambisayo silungele iofisi, ngaphandle nezinye iindawo zikawonke-wonke. Ukusetyenziswa kwamandla kunye nexabiso lezixhobo zomoya ezihambayo ziba phezulu kakhulu.
Ixesha Post: Oct-12-2020
I-Shenzhen Lianchuang Technology Group Co, Ltd idibanisa i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo, okwangoku ibambelela kubuchule bokuzenzela kunye nesikhokelo seemfuno zabathengi.
Nxibelelana nathi ngoku
Ifowuni: + 86-755-84150793